किन अझै कुमारी छन् साउथका यी ६ हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्री ? – Etajakhabar
किन अझै कुमारी छन् साउथका यी ६ हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्री ?
मुम्बई – साउथ फिल्म उद्योग पनि बलिउड झै लोकप्रिय छ । यहाँ पनि एकसेएक हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्री छन् । उनीहरुको प्रशंसक पनि विश्वभर छन् । साउथ फिल्म उद्योगका ती ६ अभिनेत्री जो अहिलेसम्म छन् कुमारी । अहिले चर्चाको बिषय पनि त्यही हो ।
राशि खन्ना -बलिउड फिल्म ‘मंद्रास क्याफे’मा राशिले काम गरेकी थिइन् । साउथको सुन्दर अभिनेत्रीको लिष्टमा उनको नाम अग्रपंतिमा आउने गर्दछ । उनी अहिलेसम्म कुमारी छन् ।
कीर्ति सुरेश-साउको एकसेएक सफल फिल्ममा कीर्तिले काम गरेकी छन् । उनले मुख्य हिरोइनबाट नै साउथ करियर सुरु गरेकी हुन् । निकै सुन्दर र अहिलेसम्म कुमारी उनले मलयालम फिल्मबाट अभिनय करियर सुरु गरेकी हुन् ।
तमन्ना भाटिया-बलिउड फिल्ममा समेत काम गरेकी तमन्नालाई चर्चित तुल्याउने काम भने साउथ उद्योगले गर्यो । साउथकी चर्चित तमन्नाले थुप्रै हिट फिल्म दिएकी छन् । तमन्नाको सुन्दरताको लाखौ दिवाना छन् । उनी पनि अबिबाहित हुन् ।
काजल अग्रवाल-काजलले अहिलेसम्म ३० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । ४ बलिउड फिल्ममा काम गरेकी उनको सुन्दरताको चर्चा साउथ र बलिउड दुबैतिर हुने गरेको छ । कुमारी अभिनेत्रीको लिष्टमा उनी पनि पर्दछिन् ।
रकुल प्रीत सिंह-साउथका सबैभन्दा चर्चित अभिनेत्रीमा पर्दछिन् रकुल प्रीत सिंह । उनले बलिउड फिल्ममा पनि काम गरेकी छन् । उनी निकै सुन्दर छिन् ।
नित्या मेनन-धेरै भाषाको फिल्म अभिनय गरेकी अभिनेत्री तथा गायिका नित्या मेनन पनि अहिलेसम्म कुमारी छिन् । साउथ फिल्मको सुन्दर अभिनेत्री मध्यको उनी पनि एक हुन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०१, २०७५ समय: १९:०८:४४